Sheekadii xaliimo - Telling the Real Story
“BBC-da un ayaan ka maqlay in dad gaajo ugu dhinteen saxaraha, laakiin weligay isma oran dadka ayaa kelyaha lagala baxaa…” ayey dhahday Xalima oo ka sheekaynaysa khatarihii ay kala soo kulantay tahriibta. ”safarka kama haysan war fiican. Haddaan ogaan lahaa in safarku sidaas u khatar badanyahay ma aanan soo baxeen. Runta waxaad arkaysaa marka aad soo baxdid.”
Xalimo markii hore kuma aysan fekerayn in ay u safarto yurub laakin taasi waxay is bedeshay markii ay Xalimo ku dhaawacantay qarax ka dhacay magaalada muqdishu. Xalimo markii ay dhaawacmaysay waxay ka qayb qaadanaysay olole nadaafadeed oo laga wada magaalada Muqdisho. Xalimo waxay safar dawayn ah u aaday dalka Jabuuti. Markii ay Xalimo timid dalka Jabuuti waxaa loo sheegay in dawaynta iyo qaliinka ay u baahantahay aad qaali u yahay.
Markii ay iska bixin kari waysay dawaynta iyo qaliinka ay u baahantahay, Xalima waxay la tashatay dad soomaali ah, si ay xal ugu hesho dhibaatada haysata. Sidaas darteed waxaa Xalimo lagula taliyey in ay aado Yurub iyadoo sii maraysa Saxaraha weyn ee Afrika. Xalimo ka walaacsay xaaladeeda caafimaad isla markaasna garanayn wax ay samayso, waxay go’aansatay in ay raacdo koox qaxooti soomali ah oo u socda dalka Sudan iyagoo sii dhex maraya dalka Eritrea.
Shilkii ugu horeeyey ee Xalimo la kulanto wuxuu ka dhacay dalka Sudan oo tiro qaxooti ah ku qaracmeen webiga Niil. Dadka dhintay waxaa la degtay doon kale oo dhinac socotay doonta ay Xalimo la socotay. “waxaa ka mid ahaa dadka dhintay qoys Eritriyaan ah oo ka kooban aabbe, hooyo iyo caruurtoodii” ayey tiri Xalimo. “dhibaatada oo dhan waxat ka bilaabatay markii aan nimid dalka Sudan. Waxaan soo galay magaalada Khartoum aniga oo qalbi jasban.”
Markii ay soo gashay Liibiya, Xalimo waxay la kulantay dhibaatooyinkii ugu xumaa. Xalimo waxaa adoontii kala iibsaday magafayaal (mukhalisiin) kuwaas oo kula kacay jirdil iyo waxashnimo. Magafayaashu wax naxariis ah uma muujin Xalimo oo dhaawacyo hore qabtay. Xalimo waxaa la dhigay hospital ku yaal Liibiya jirdilkii ay magafayaashu u geysteen waged.
“magafayaashu waxay mid mid ula baxayeen wiilasha qaxootiga ah, waxayna soo noqonayeen iyagoo sanka iyo afkaba dhiig ka da’ayo” ayey tiri Xalimo. “dhalinyarada qaarkood waxaa lagu qabtay koronto waxaana la soo celinayey iyagoo ooyaya. Aniga xataa waxay ii qaraaceen si xun, in kastoo ay arkayeen in aan dhaawac ahay”.
Markii ay bixisay 1000 doolar ayaa Xalima la saaray doon ay saarnaayeen dad gaaraya 300 oo qof.
“wax dhib ah nama haysan, maadaama aan saarnayn doon nefis ah oo weyn” ayey tiri Xalima.
Ugu dambayntii Xalimo waxay timid dalka Talyaaniga. Xalimo waxay isla markiiba ogaatay in yurubtii ay ku riyoonaysay ay ka duwantahay midda ay indhaheeda ku aragtay. Markii faraha laga qaaday ka dib waxaa muddo 6 bilood ah la dejiyey xarun ku meel gaar ah. 6 bilood ka dib waxaa dalka Talyaaniga laga siiyey deganaansho waxaana lagu dhex fasaxay dalka. Maadaama aysan ku hadlin luqadda dalka, Xalima waxaa soo wajahay caqabado faro badan. Xalima waxay guursatay nin somali ah oo ogaatay in uu xaas kale leeyahay sidaas darteedna iska furtay.
Markii ay ku adkaatay in ay ku sii noolaato dalka talyaaniga isla uur yeelatay. Dad somaaliyeed ayaa Xalimo ka caawiyey sidii ay ugu safri lahayd dalka Sweden oo ay doonaysay in ay magan gelyo waydiisato. Intii ay sugaysay go’aan laga gaaro dacwadeeda, Xalimo waxay dhashay gabar.. Dacwaddii qaxootinimo ee Xalimo waa laga diiday dalka Sweden maadaama ay faro ku leedahay dal kale oo yurub ah (Italy).
Iyadoo cabsi ka qabta in dib loogu celiyo talyaaniga, Xalimo waxay u carartay dalka Norway halkaas oo markii ay tagtay lagu soo dhoweeyey lana dejiyey.
“waxaan Norway ka helay nolol yara wanaagsan” ayey tiri Xalimo. “waxay I siiyeen guri. Lakin waxaad tahay sidii neef lo’ ah oo la leeyahay. Yurub waxaa ka dhexeeya kumbiyuutar” ayey tiri Xalimo oo ula jeeda nidaamka faraha ee yurub ka dhexeeya. “ Norway waxay go’aan ku gaartay in ay talyaaniga dib iigu celiso. Xataa waxay ii sheegeen been waayo markii hore waxay ii balan qaadeen in ay igu celin doonaan Sweden oo gabadheydu ku dhalatay”.
Markii loo soo tarxiilay Italy, Xalimo waxaa mar kale ku adkaatay in ay cunto iyo hoy u hesho nafteeda iyo gabadheeda. Xalimo waxay go’aan ku gaartay in ay caawinaad ka raadsato kaniisad, isla markaasna shaqo raadsato. Lakin ugu dambayntii waxay go’aan ku gaartay in ay u safarto dalka Jarmalka.
”waxaan yurub dhex wareegayey 7 sano, waxaana la iga soo tuuray wadamo badan” ayey tiri Xalimo. ” waxaad ogaanaysaa in aad tahay qof ajnabi ah. Ma aanan filayn in sidani iga qabsanayso yurub. Ma filayn in wadan yurub ah la iga soo tarxiilayo” ayey tiri Xalimo.
Waqtiga waraysigan lala yeeeshay Xalimo waxay weli go’aan ka sugaysaa hay’adda socdaalka dalka Jarmalka. Waxaa kala ogaan doontaa in loo ogolaado in ay ku noolaato Jarmalka iyo in lagu celiyo Italy.
“waxaan joogay yurub 7 sano wax ii hagaagayna ma jiraan. Caruurtaydii iyo waalidkay midna wax uma tari karo” ayey tiri Xalimo.
Inkasta oo mustaqbalku yahay mid aan wanaagsanayn, haddana Xalimo waxay weli qabtaa rajo.
“waxaan rajaynayaa in aan xaaladan ka baxo,” ayey tiri Xalimo. “ Jarmalku waa wdankii afraad oo faro iga qaaday mana ahayn waxaan rajaynayey”.